I-Orders yoLawulo lwe-Donald Trump - Uludwe kunye neenkcukacha
Amagunya okuQala okuQala kwi-Immigration kunye ne-Obamacare
UMongameli uDonald Trump wasayina ngaphezu kwesigamu sesigqeba esigqeba sesibini kwiintsuku zakhe zokuqala ezili-10 kwiNdlu eNtshonalanga kuquka ukuchithwa okubangelwa ukufuduka kwamanye amaSilamsi kangangokuba wenza inxalenye ephambili yephulo lakhe le-2016 . I-Trump yayisetyenzisile igunya layo ukukhupha ii-oda zokulawula ngomhla wakhe wokuqala kwi-ofisi , ngokugqithisa inkqubo yowiso mthetho nangona wayigxeke ukusetyenziswa kukaMongameli uBarack Obama njengamandla "njengegunya elikhulu lamagunya."
Amagosa okuqala okulawula uTumpom avimbela abanye ababaleki ukuba bangene eMelika, baqhube ukuphononongwa ngokusingqongileyo kweeprojekthi zeziseko eziphambili, abathintela abasebenzi abasemagunyeni ukuba bangabikho kwiminyaka emihlanu yokushiya umsebenzi okanye basebenze kumazwe angaphandle, kwaye baqala inkqubo yokuchithwa koKhuseleko kwabaPhezulu kunye UMthetho woNonophelo ojongene noNcedo, okanye u-Obamacare.
I-Trump yinkqubo ephezulu yokuphikisana nenkohlakalo, ngokukhawuleza, yamiselwa ukuvalwa kwexeshana kumabaleki kunye nabemi bamazwe amaninzi amaSilamsi - i-Iraq, i-Iran, iSudan, iSomalia, iSiriya, i-Libya kunye neYemen - ukungena eMelika. "Ndimemezela ukuba ukungena kwama-50,000 ababaleki kunyaka-mali ka-2017 kuya kuba yingozi kumdla we-United States, kwaye ngoko unqamle nayiphi na into engenayo kuze kubekho ixesha lokuba ndivume ukuba ukungeniswa okongeziweyo kuya kuba ngumdla kazwelonke," UTrump wabhala. Loo myalelo olawulayo, wasayinwa ngoJan.
27, 2017, yadibana nemibhikisho kwihlabathi kunye nemingeni yomthetho ekhaya.
I-Trump iphinde ikhuphe inani lezenzo ezilawulayo, ezingafaniyo neendlela ezilawulayo . Izenzo eziphezulu ziphina iziphakamiso ezingaqhelekanga okanye zihamba ngumongameli, okanye nantoni na umongameli ebiza iCongress okanye ukulawula kwakhe ukwenza.
Iinqununu ezilawulayo zikhokelo ezisemthethweni ezisuka kumongameli kwi-arhente zolawulo.
Le miyalelo yolawulo ishicilelwe kwiRejista ye-Federal, elandelela kwaye iphrintela imimiselo ecetywayo kunye yokugqibela equka izibhengezo zikaMongameli.
Uludwe lwee-Orders zoLawulo lokuQala loDonald Trump
Nalu uluhlu lweedolophu ezilawulayo I-Trump yakhishwa kungekudala emva kokuthatha i-ofisi.
Ukunciphisa Umthwalo wezoQoqosho woKhuseleko lweMonde kunye noMthetho wokuNakekelwa onoxanduva olungapheliyo : I-Trump isayine lo myalelo olawulayo ngomhla kaJan. 20, 2017, kwiiyure zokuhamba kwiNdlu eNtsundu. Umyalelo olawulayo awuzange uchithe u-Obamacare, okanye ucele iCongress ukuba ichithe ukufezekiswa komthetho ka-Obama, kodwa uTrump wathembisa ngexesha lophulo lokuba "ngosuku lomlawuli weTrump, siya kucela iCongress ukuba ikhuphe ngokukhawuleza i-Obamacare." Umyalelo wokulawula weTrump kwi-Obamacare kuphela eyalelwe i-arhente ye-federal ukuxhasa umgaqo-mthetho ngelixa isebenza "ekuncitshiseni imithwalo yemfuneko yezoqoqosho kunye nokulawula" kwiindawo zaseMelika nakwiinkampani.
Iingcebiso zokusingqongileyo kunye noVavanyo kwiiProjekthi eziPhambili zeZiseko zeZiseko: I- Trump isayine lo myalelo olawulayo ngomhla kaJan. 24, 2017. Umyalelo ufuna ukuba urhulumente "ahlawule kwaye ahambelane, ngendlela ehambelana nomthetho, ukuhlolwa kweemeko kunye nokuvunyelwa kwazo zonke iiprojekthi zeziseko," nangona iTrump ingacacisekanga ngokuchanekileyo ukuba umyalelo kufuneka wenziwe njani. Umyalelo weTump ufuna umongameli weBhunga leNdlu ye-White House kwiMgangatho woMmandla ukuchonga ukuba iprojekthi "yinto ephambili," kwaye ixhomekeke ekulandeleni ngokukhawuleza, kwiintsuku ezingama-30 okanye ngaphantsi.
Ukuphucula ukuKhuselwa koLuntu kwi-International of United States : I-Trump isayine lo myalelo olawulayo ngomhla kaJan. 25, 2017. Inciphisa imali yombuso kwiindawo ezibizwa ngokuba ziyingcwele, izixeko ezingagxininisi imithetho yokufuduka. Amagunya angcwele kwi-United States aphula umthetho ngokusemthethweni umthetho we-Federal inzame yokukhusela abafokazi ukuba basuswe eMelika. Ezi zikhundla ziye zabangela ingozi engenakulinganiswa kubantu baseMerika kunye neyona nkampani yaseRiphabhliki, "uTrump wabhala. Lo myalelo wwandisa inkcazo yokungena kwamanye amazwe urhulumente angashenxisa.
Uphuhliso lweMida kunye nokuThuthukiswa koLuntu lokuThuthukiswa koLuntu : I-Trump isayine lo myalelo olawulayo ngomhla kaJan. 25, 2017, kwisinyathelo sokuqala ekuzalisekeni kwephulo lakhe lokubamba udonga kumda waseMelika kunye neMexico. "Nguwo umgaqo wegatsha elilawulayo ukukhusela umda osezantsi we-United States ngokusebenzisa ukwakhiwa ngokukhawuleza kwodonga olubonakalayo emngceleni osezantsi, uhlolwe kwaye luxhaswe ngabasebenzi abaneleyo ukwenzela ukuthintela ukufuduka okungekho mthethweni, ukuthengiswa kweziyobisi kunye nokuthengiswa kwabantu, kwaye izenzo zobugandlo, "uTrump wabhala. Kodwa umyalelo awuzange ukhethe indlela yokuhlawula udonga, nangona i-Trump yathi irhafu ephuma ngaphandle evela eMexico ngaphandle kwepesenti ezingama-20 ingaba phakathi "kwebhokisi" lokukhetha.
Ukukhusela isizwe esivela kwiNgqungquthela yabangangaphandle kwi-United States : I-Trump isayine lo myalelo olawulayo, ngokugqithiseleyo kakhulu, ngoJan 27. "Ukuze ukhusele amaMelika, i-United States kufuneka iqinisekise ukuba abo bangenayo kuleli lizwe bayithwali Iimpembelelo zentlonelo malunga nayo kunye nemigaqo yayo yokusekela. I-United States ayikwazi, kwaye ayifanele, iyavuma abo abangayixhasi uMgaqo-siseko, okanye abo babeka imibono enobudlova phezu komthetho waseMerika, "uTrump wabhala. Ukuvinjelwa kwabafuduki abavela kumazwe asixhenxe kwakuza kugcina iintsuku ezingama-90. Ukuvinjelwa kwababaleki kwakuza kuhlala iintsuku ezingama-120.
Izibophelelo zokuziphatha ngeCandelo loLawulo lweeNtloko : I-Trump yasayina lo myalelo ngomhla kaJan. 28, 2017. Iimyalelo zidinga ukuba abasebenzi baseburhulumenteni basemthethweni bawutyikitye umgaqo-nkqubo owenqabela ukuba bangabambeleli kwi-agency yabo ubuncinane iminyaka emihlanu emva kokushiya urhulumente. Iyabalathisa nokuba basebenze egameni likarhulumente welizwe langaphandle okanye iqela lezepolitiki langaphandle, nokwamkela izipho ezivela kwi-lobbyists ebhalisiweyo kunye nemibutho yokucebisa.
Ukunciphisa umGaqo kunye nokuLawula iindleko zolawulo : I-Trump isayine le myalelo ngomhla kaJan. 30, 2017. Lo myalelo udinga urhulumente wephondo ukuba aphelise imimiselo emibini emthethweni ngamnye omtsha okhutshwe. "Ukuba unomthetho owufunayo, uNombolo 1, asiyi kuvunyelwa oko kuba sele ivunyiwe mhlawumbi kwiifomu ezili-17 ezahlukeneyo. Kodwa ukuba senza, yodwa indlela onayo ithuba kufuneka sigqibe imimiselo emibini kuyo yonke imimiselo emitsha. Ngoko ke ukuba kukho umgaqo omtsha, kufuneka banqothule amabini, "u-Trump uthe wayesayina umyalelo olawulayo. Umyalelo uthi iindleko zokumisela nokunyanzelisa imimiselo emitsha kufuneka zingenise imali kwi-budgetary federal, efuna ukuba kupheliswe miselo.
I-Trump Criticism ye-Orders yoLawulo
I-Trump yasebenzisa imiyalelo yesigqeba nangona yagxeka ukusetyenziswa kuka-Obama kubo. NgoJulayi 2012, umzekelo, iTump usebenzise i-Twitter, ithuluzi lokuzonwabisa loluntu loluntu , ukukhonkotha umongameli: "Kutheni i-@BarackObama isoloko ikhupha imiyalelo elawulayo eyona magunya amakhulu?"
Kodwa iTump hayi kuze kube yinto yokuthi uya kunqanda ukusebenzisa iinqununu ezilawulayo, esithi Obama "uholele indlela." "Andiyi kukhanyela." Ndiya kwenza izinto ezininzi, " UTumpula wathi ngoJanuwari 2016, wongezelela ukuba i-oda yakhe yesigqeba yayiza kuba "izinto ezilungileyo." "Ndiza kusebenzisa kakuhle kakhulu kwaye baya kusebenza injongo engcono kunokuba enze," watsho.
I-Trump ithembisa ngokuqinisekileyo kwiphulo lokukhankanya ukuba uya kusebenzisa igunya lakhe ukukhupha iilawulwa ezilawulayo kwimiba ethile. NgoDisemba 2015, uTumpom wathembisa ukuba uya kubeka isigwebo sokufa kuye nabani na abanetyala lokubulala ipolisa ngokusebenzisa umyalelo olawulayo. "Enye yezinto zokuqala endizenzayo, ngokwemigangatho yolawulo xa ndiyiphumelela, kuya kubakho ukusayina isitatimende esinamandla, esomeleleyo esiya kuphuma ilizwe - kwilizwe-ukuba ubani obulala ipolisa, umpolisa, amapolisa igosa - nabani na obulala ipolisa, isigwebo sokufa. Kuya kwenzeka, kulungile? " UTump uthe ngelo xesha.
Ngaba Ufanele Uphumelele Uvavanyo Kuvoti?
Ngaba Ngaba Unamabhobho Ohlala Kwii-Eyelashes Zakho?
ULazaro-Indoda evuselwa kwabafileyo
Bika iingongoma kwi-Microsoft Access 2013
Inkqubo yebhokisi yeNtetho yokufaka
I-Olympic Weightlifting: Imithetho kunye nokugweba
Imbali Yembali yaseMelika - 1783-1800